Aangoon fira hin qabdu, Wallaggaan kan ficcisiisaa jiru Lammaa Magarsaati - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAangoon fira hin qabdu, Wallaggaan kan ficcisiisaa jiru Lammaa Magarsaati
Aangoon fira hin qabdu, #Wallaggaan kan ficcisiisaa jiru Lammaa Magarsaati
Presidentii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Duraanii , Ministeerri Waraanaa Bulchiinsa Abiyi Ahmed ammaafi EPRDF (EPP) kan ta’ee Lammaa Magarsaa bara 2016 Akkuma aangoo Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti muudameen, Muudamee ji’ota murasa booda Ayyaana Irreechaa #Hora_Arsadee Irratti Uummata Oromoo Guyyaa tokkotti 700 ol ficciseese, TPLFtu nu fixee jennee obsine itti dhiifne. Dhugaan jirtu garuu Yakki uummatarratti raawwatame Naannoo Oromiyaa Bulchiinsa Lammaa Magarsaa jalatti ta’uudha. Gaafatamni yakka kanaa Lammaa Magarsaa , Abiyyi Ahmedifi TPLF dha.
Ajjeechaa Jumlaa har’a Uummata Keenya Wallaggaa irratti raawwatamaa jiruuf Gootni keessaan #Lammaa_Magarsaa Ministeerri waraana Itoophiyaa eenyuutti qabaturee?
Human uummata kanaa hin afuu egaa, Oromoo bakka jirtuu qophaa’i isa addaan sii hiree sii cabsuuf carraaquu addaan hirii cabsi.
AGM: Olmaa KFO Boqqojjiif Sirkaa, Ajjeechaa Oromoo Wallaagga fi Oduuwwan 26/01/2020 itti dhiyaadhaa.
Garuu bakka lama taatee jirti.
Walakkaadhaa ol koomaandi postii jalatti sanyii duguugamaa jirti.
Gamisni ammoo hanga tokko bilisa jirti.
Hanga ammaatti godinaaleen 12 tahan guutummaatti ykn gartokkeedhaan koomandi postii jala jiru.
1. Qeellam Wallaggaa
2. Wallagga Lixaa
5. Gujii Lixaa
6. Wallagga Bahaa
7. Horroo Guduruu Wallaggaa
8. Buunnoo Beddellee
10. Shawaa Lixaa (walakkaa ol)
11. Salaalee ykn Shawaa Kaabaa (walakkaa)
12. Jimma (walakkaa)
Kana keessa teenyee, Oromoo bakka 2 fi sadiitti cittee bulaa jirtu keessatti waanuma filannootuu akkamiin haasofna mee?
Waan filannoo dubbachuu dura kana sirreessuun dirqama dha.
Yoo akkana hin taane, eenyuun na filadhu jechuuf deemu?
#Ethiopia, #Eritrea, #Somalia “adopted a Joint Plan of Action for 2020 and beyond focusing on the two main and intertwined objectives of consolidating peace, stability and security as well as promoting economic and social development.” https://t.co/dY5Augwp1u pic.twitter.com/M6IhXYlzYO
Oromoo gandaaf amantaan qoqqooduuf yaaluun kun tooftaa haraa miti. Dura taa’aan Bilxiginnaa waggaa lamaaf walakkaa duras toftaadhuma kana hojiirra oolchaa ture. Oromoo qofa osoo hintaane qabsaa’oonnif saboontoonni Oromoo akka waliitti dhiyaatanii hin hojjanne garaagarummaa isaaniitu labsamaa ture. “Jawaarif Lammaan tokkoo miti” jechaa ture. Jijjiirama booda Lammaan Oromiyaa irra dhiibamee bahe, Jawar irratti waan aggaammii ajjeechaa fakkaatutu yaalame. Kan ummanni baayyee hinbeekiin doorsiifni ajjeechaa Lammaa irratti godhamaa turees iccitiin gaaf tokko hin baha.
Har’a Oromoon qarqaraa amma qarqaraatti bilxiginnaan maal akka taate hubateera. Kaadiroonni Abiyyi filannoo dhufaa jiru kana irratti PiPin sagalee akka hin arganne waan beekaniif Oromoon gandaaf amantiin qoqqoodamee akka walirratti ka’u hojjachaa jiru. Yaanni isaanii Oromiyaan dirree jeequumsaa taate jedhanii hoggantoota paartii dhabamsiisanii mootummaa abbaa irree ta’uudha. Oromoon kana itti dammaquu qaba. Har’a kan masaraa mootummaa keessa taa’aa jiru nama Oromoof Oromummaa hadheefatee jibbuu fi sabboonummaa Oromoo cabsuuf karoora baafatee itti hojjachaa jiruudha. Isumarraa dhageenye. Kana wal sobuun hin barbaachisu. Falli jiru ji’a jahaa booda kaardidhaan gara mana isaanitti gaggeessuu dha. Hin ta’aa jennaan harree qalle, hin ta’uu jennaan harree ganne jedhu.
ዶር ኣብይ ኣህመድ ለጃዋር መሃመድ ኢና ብቅርብ ወደ ሃገር የገቡትን ጩሉለዎችና ጭልፍቶች ናቸው ቢሎ ገደል ከተታቸው
Kolonel Abiy Ahmed Jawar Mohammed fi aktiivistoota Diyaasfooraa biyya galanii mootummaa harkaa hambaa funaannatanii jiraataniin Cululloota foonkajeellachuu dhufteefi saroota waan jala buusan bu’attudha jedhe